Drafitra tohatra maoderina
Ny tohatra ambaratonga ACE amidy dia misy tohatra hazo sy vy, manamora ny fampifanarahana ny fomba famolavolana ny habakao.
Ny dian-tongotra kely misy tohatra miolikolika dia manamora ny fampidirina amina endrika rehetra. Ny tohatra spiral dia mitahiry metatra toradroa satria izy ireo dia mipetraka faritra kely kokoa noho ny tohatra mahazatra. Miaraka amin'ny endrika sahisahy sy fanaingoana isan-karazany, izy ireo dia mety ho zavatra mampiavaka ny tetikasa.
Ny stringer roa sosona dia famolavolana tohatra mitsingevana izay misy ireo kofehy roa eo ambanin'ny tohatra ary avy eo amin'ny sisin'ny tohatra fijery mitsinkafona. Ny tohatra misy tadiny roa dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana trano na ara-barotra, ary koa amin'ny tetikasa anatiny sy ivelany. Ilay tohatra misy tadiny roa dia mahatsapa milamina kokoa noho ny tohatra tokana.